प्राकृतिक प्रकोप र यसको व्यवस्थापन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ श्रावण २५, आईतवार ०२:४३ गते
पहाड खस्दा सयौँको मृत्यु र हजारौँ विस्थापित । माटोको ढिस्कोले पुरिएर कयौँको मृत्यु । खोलाले पुल बगाउँदा आवतजावत गर्नमा समस्या । तराईमा सयौँ घर डुबानमा आदि आदि ।
यी माथि लेखिएका हरफ्mहरु विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचारका शीर्षकहरु हुन् । सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा र राम्चेबीचको जुरेमा गत शनिबार बिहान गएको भिषण पहिरो हो, यसको पछिल्लो उदाहरण । प्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनि मानिसहरुले विभिन्न किसिमका मानवीय क्षति, भौतिक क्षति व्यहोर्दै आउनु परेको कुरा सर्वविदितै छ । यसले गर्दा मानिसले आफ्mूले जीवनभरि खाइ–नखाइ जोडेको सम्पत्ति एकैछिनमा सखाप पारिदिन्छ । र, उसलाई घरबारविहीन बनाइदिन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोप न त पूर्वजानकारीअनुसार आउँछ, न त बाजा बजाउँदै आउँछ । र, प्राकृतिक प्रकोप भनेको मानिसको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो । मानिसले चाहेर र नचाहेर अर्थात् उसले यससँग सम्झौता गर्न र आफ्नो पहुँचमा राख्न सक्दैन । यदि त्यसो हुँदो हो त विभिन्न समयमा आएका महाभूकम्प, बाढी, सामुद्रिक आँधीहरुका कारण हजारौँ मानिसले जीउज्यान गुमाउन पर्ने, लाखौँ मानिसहरु घरबारविहीन बन्नुपर्ने अवस्था नहुँदो हो । र, यसले पूर्वजानकारी दिएर आउँदो हो त यस्तो मानवीय क्षति हुनेथिएन ।
नेपालको सन्दर्भमा अझ भन्नुपर्दा यहाँको भौगोलिक बनावट अव्यवस्थित मानवीय बसोबासका कारण पनि हामी प्राकृतिक प्रकोपको शिकार बन्नु परेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको शिकार भैसकेपछि पनि तत्काल यसको व्यवस्थापन र उद्धार गर्न नसकिने अवस्थाहरु र कानुनी जटिलता, प्राविधिक जटिलता, यातायातका कारण विकटताजस्ता कारणहरुबाट हामीहरुलाई तत्काल राहतभन्दा पनि आहत हुने गरेको छ ।
त्यसका साथसाथै भवितव्य भएको वा हुने ठाउँबाट उपचारका लागि ल्याउँदा हुन सक्ने समस्याहरु तत्काल आर्थिक व्यवस्थापनका जटिलताहरुको कारणबाट मानिसको तत्काल उपचार हुन नसक्नुजस्ता कारणले हामीहरुलाई झन् पीडामाथि पीडा थप्ने गरेको पाइन्छ । के हामीहरु अब सधैँभरि नै प्राकृतिक प्रकोपको शिकार भैराख्ने त ?
अब यसबाट जोगिन र आफ्नो जीउधनको संरक्षण गर्नका लागि यसबाट बच्न र न्यूनभन्दा न्यून क्षतिका लागि प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिनका निम्ति र प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन गर्न र यसको प्रकोप हुन सक्ने ठाउँको सीमांकन, रेखांकन र त्यस क्षेत्रको पहिचान गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ । नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपहरु दिनदिनै किन बढ्दो रुपमा छन्, यसको तथ्य पहिल्याउन जरूरी छ ।
नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दो रुपमा प्राकृतिक विपत्ति बढ्नुमा हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट, अव्यवस्थित बसोबास, प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको बलात्कार, दोहन, योजनाबिनाका विकास निर्माणका कार्यको थालनी, बिनासर्वेक्षण र बिनादूरदृष्टि निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकहरु जसमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको न्यूनीकरणभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । हो, यस्ता विविध कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन हामीहरुमाथि प्राकृतिक प्रकोपको संख्या बढ्दै छ, जुन ज्यादै नै दर्दनाक र पीडादायी हुन्छ । प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागीजस्ता घटनाहरु निर्मूल गर्न त नसकिएला तर यसको न्यूनीकरण गर्न अवश्य नै सकिन्छ । यो कसरी सम्भव छ ? सम्भव नहुने कुरै छैन । यसका लागि आजैबाट प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु जल, जमिन र जंगलको अस्वाभाविक दोहन तत्कालै रोकिनुपर्छ । मानवीय बसोबासलाई व्यवस्थित र योजनागत हिसाबबाट मानबबस्तीको सुरूवात गर्नुपर्दछ । विकासका नाममा गरिएका ग्रामीण सडकहरु विस्तार गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध ढंगबाट प्राकृतिक स्रोत र साधनको कमभन्दा कम दोहन हुनेगरी अगाडि बनाउन पर्दछ । खोला, नदीनाला, पहाडका फ्mेदी, सडकका छेउछाउमा रहेका घर, मानवबस्तीहरुलाई सुरक्षित तवरबाट व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । खोलानाला, पुलपुलेसाहरुलाई बलियो र सुरक्षित बनाउन पर्दछ ।
त्यस्तै, आगामी दिनमा नेपाल–भारतबीच भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरुको समीक्षा हुन जरूरी छ । प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्ने सम्भावना रहेका क्षेत्रहरुको बेलामा नै पहिचान गर्न जरूरी देखिन्छ । त्यसरी पहिचान गरिएका क्षेत्रहरुमा जुनसुकै बेला पनि हाई अलर्टमा रहने गरी सरकारी तहबाट नेपाली सेना, सशस्त्र, जनपथसहित त्यस क्षेत्रका युवाशक्ति, विभिन्न क्लब, संघसंस्था, विद्यार्थी, राजनीतिक दल, रेडक्रस र अन्य स्वास्थ्य संस्थासहितको एकीकृत विशेष टोलीको निर्माण गरिनुपर्दछ, ताकि यस्ता विपद्को घडीमा यसरी निर्माण गरिएको टोलिद्वारा छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न सरल र सहज होस् ।
जहाँ यस्ता किसिमका दैविक विपत्तिहरु आउने गर्दछन्, त्यहाँ राज्यको सम्पूर्ण साधनस्रोत र ध्यान जान जरूरी छ । जनतालाई राहत वितरण गर्ने कुरामा राज्यको कानुन कहिले पनि बाधक बन्नुहुँदैन । यसका साथसाथै उच्च जोखिममा रहेका मानवबस्ती भौतिक संरचनाहरुको बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस्ता मानवीय विपद्का घडीहरुमा तत्काल सहयोग गर्नका लागि एउटा विशेष कोषको निर्माण गरिनुपर्दछ, जुन कोषका शाखाहरु देशका सबै जिल्लामा पनि हुनुपर्दछ ।
अब रह्यो कुरा, के अहिलेसम्म यस्ता कुनै पनि कुराहरु भएका छैनन् त ? भएका छन्, तर जति मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैेन । यस्ता कार्यका लागि विनियोजन गरिएको बजेटहरु जति मात्रामा सदुपयोग हुनुपर्ने हो, त्यति मात्रामा यो हुन सकिराखेको पाइँदैन । यस कारण अब उपरान्त प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनका लागि राज्यबाट विशेष किसिमको कानुनी कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । राज्यबाट यस्तो योजना आउनुपर्छ, जुन योजनाले अबका दिनहरुमा केही मात्रामा भए पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुका लागि राहत मिल्न सकोस् । उनीहरुले देशमा सरकार भएको महसुस गर्ने सकून् । सरकारले पनि यस्ता बेलामा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी राहत वितरणमा कन्जुस्याइँ नगरोस्, किनकि यसरी बाँडिने राहत कुनै व्यक्तिविशेष वा कुनै सरकारको प्रमुख वा मन्त्रीविशेषको नभै जनताबाट उठाइएका करहरुबाट प्राप्त हुन्छन् । यसरी उठाइएका कर यस्तै कामहरुका लागि हुन्, न कि नेता, मन्त्री, माननीय र सरकारका आसेपासेहरुका उपचार र वैदेशिक भ्रमणका लागि । यो अहिले ज्यादै विचारणीय विषयका रुपमा रहेको छ ।